Waxyaabaha Sameeya Kumbuyuutarrada GIS - Geofumed
Disember, 2007 Cadcorp, Geospatial - GIS, GvSIG, uDig
Hadda waxaan la kulannaa qulqulo tiknoolajiyado badan iyo noocyada codsiyada ku jira nidaamyada macluumaadka juqraafi ah oo suurtogal ah, liiskan, oo kala-tagaya nooca shatiga. Mid kastoo ka mid ah wuxuu leeyahay xiriiriye bog oo aad ka heli karto macluumaad dheeraad ah:Barnaamijka ganacsiga, ama ugu yaraan laysan bilaash ah
ArcGIS (Hogaamiyaha adduunka ee codsiyada GIS)
Autodesk Map (hogaamiyaha adduunka ee codsiyada CAD)
MicroStation Geographics (hadda Bentley Map)
Barnaamijka bilaashka ahguud ahaan ma aha mid caan ahinkastoo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin kuwo xoogan ama ka wanaagsan kuwa aan lacag la'aanta aheyn.
Qalabaynta Khariidadda Guud (GMT)
Ugu yaraan 14 ee codsiyadan waxay ku shaqeeyaan Mac, ama Java iyo 17 Linux. Dhowaan waxaan isbarbardhigay, halkan waxaad arki kartaa qaar:
Waxaa laga yaabaa in aan wax ka maqalnay ArcGIS, Geomedia, Mapinfo, Manifold, Grass, GvSig ... in kasta oo kudhowaad dhamaanteen ay arkeen faallooyin ku kala firirsan hoteelooyin badan, waxaa macquul ah in isbarbardhig ku salaysan dhammaantood ay maqan yihiin. Ma jiraan fikrado ku saabsan kuwa kale ee aad rabto inaad wadaagto? bogga wikipedia isbarbardhiga qaabka qaabka ayaa lagu muujiyay
Post Previous«Previous Ku xir xirka Dijital ah ee leh Mapinfo, Khariidadda Autodesk iyo Arcmap
Post Next Ku saabsan PaperspaceNext »
3 Jawaabo "GIS Software Alternatives"
Maria Parra isagu wuxuu leeyahay:
Beddelka ayaa mar walba wanaagsan. Barnaamijyada ganacsiga waxay uqalmayaan maalgashi badan iyo marar badan waxay sameeyaan waxyaabo badan oo aan ku guuleysan karno jilic bilaash ah.
Thanks for Santi fiirinta, waxaan horay u sameeyey ka mid noqoshada.
Santi isagu wuxuu leeyahay:
Waxaad ka tagtay GIS aad u ballaaran oo ku yaala England, Japan, Australia iyo USA ... oo aan ka yarayn dalalka kale, laakiin sii kordhaya ayaa isticmaala dad badan.
Waa mashruuc GIS ah kaas oo akhriya qaabab badan oo loo baahan yahay (iyada oo aan loo baahnayn in la soo dhoofiyo), iyo xulafada ugu fiican si ay u weeraraan nooc kasta oo xog ah.